बाँडफाँड भयो तेह्रथुम पावर कम्पनीको आईपीओ, पर्‍यो त तपाईंलाई ? —
बाँडफाँड भयो तेह्रथुम पावर कम्पनीको आईपीओ, पर्‍यो त तपाईंलाई ?
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०५:५१ admin
काठमाण्डौं । तेह्रथुम पावर कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बाँडफाँड भएको छ । शुक्रबार ७४ हजार ४०० जनालाई गोलाप्रथाबाट १० कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटले जनाएको छ । यससँगै आईपीओमा आवेदन गरेका ८ हजार ८२० वटा आवेदन रद्ध भएको छ ।
आईपीओ खरीदका लागि सर्वसाधारणबाट माग भएको तुलनामा ३९.३४ गुणा बढी २ करोड ९३ लाख ७८ हजार ४०० कित्ताका लागि आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये १ लाख ८ हजार ७६० कित्ताको आवेदन रद्ध भयो भने २ करोड ९२ लाख ६९ हजार ६४० कित्ताको माग सदर भएको थियो ।
कुल आवेदकमध्ये २२ लाख ८१ हजार ०४७ ( कुल सदर आवेदकमध्ये २२ लाख ७२ हजार २२७ जना) को हात खाली भएको छ । यो संख्या कुल आवेदकको ९६.८४ प्रतिशत (कुल सदर आवेदकको ९६.४७ प्रतिशत) हुन आउँछ ।
यस आधारमा हेर्दा कुल आवेदकको ३.१६ प्रतिशत र कुल सदर आवेदकको ३.५३ प्रतिशतले मात्र शेयर पाएका छन् । कम्पनीले भदौ ९ गते देखि १३ गतेसम्म प्रतिकित्ता १०० अंकित दरमा ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशनमा ल्याएको थियो ।
कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर ७ लाख ४४ हजार कित्ता शेयर खरीदका लागि सर्वसाधारणबाट माग भएको थियो । कम्पनीले यसअघि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई ४ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
तेह्रथुममा सञ्चालित ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला जलविद्युत आयोजना निमार्ण गरेको छ । कम्पनीले तेह्रथुम जिल्लामा नै अर्को २ मेगावाटको आयोजना निर्माणको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको छ ।
जब नमिल्ने लुगा लगाएको भन्दै युवतीलाई विमानबाट निकालियो !
भदौ १८ मा रिलिज नहुने भयो ‘ए मेरो हजुर ४’, नयाँ रिलिज डेट कहिले?